★မြန်မာ့အလင်း★: Compassion meditation can act asagreat stress buster
မေတ္တာကမဌာန်းဆိုတာ ကြားဖူးရဲ့လား မုဒိမ်းကောင် မိုဟာမက် တပည့်တွေ? ဘယ်လိုလုပ်ကြားဖူးမှာလဲ။ အမြဲတမ်း လူလူချင်း ဒုက္ခပေးဖို့နဲ့ မကောင်းကြံဖို့ပဲ စိတ်ထဲမှာ ပြည့်နှက်နေတာကိုး။ မုဒိမ်းကောင် မိုဟာမက်ဘာတွေ သင်ပေးထားလဲ ကြည့်ပါလား။ လူတွေကို အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်ဖို့နဲ့ လက်စားချေဖို့ပဲ သင်ပေးတယ်။ ဘာသာမတူတဲ့သူတွေကို ရန်သူလို သဘောထားခိုင်းတယ်။ အမုံန်းတွေနဲ့ ဒေါသတွေပဲ ပြည့်နှက်နေတယ်။ မင်းတို့ စိတ်တွေ မပင်ပန်းဘူးလားကွာ? လူအချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် တိရိစ္ဆာန်လေးတွေကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် သနားကျင်နာစိတ်လုံးဝ မရှိဘူး။ အဲဒါကြောင့် ဆိတ်လိုလို မျောက်လိုလို နဲ့ ကျက်သရေကလဲ အရမ်းကို တုံးနေပြီ။ ငါတို့လဲ ငေါက်ရတာ ပင်ပန်းတယ်ကွာ။ မင်းတို့တွေ ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒက မြန်မြန်ထွက်ကြစမ်းပါ။
မုဒိမ်းကောင်တပည့်တွေ အနေနဲ့ ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်သင့်ပါတယ်။ … ကဲကဲ .. ဒီဆောင်းပါးဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀က်ဆိုက်က မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ထပ်ပြောဖို့ မလိုဘူးထင်ပါတယ်။ မုဒိမ်းကောင်တပည့်တွေ မူရင်းသိရင်ချင် click လုပ်လိုက်နော်
Washington, Oct 8: Individuals who engage in compassion meditation may benefit by reductions in inflammatory and behavioral responses to psychological stress,anew study has found.
The study has been published online at www. sciencedirect. com and in the medical journal Psychoneuroendocrinology.
"Our findings suggest that meditation practices designed to foster compassion may impact physiological pathways that are modulated by stress and are relevant to disease," said Charles L. Raison, MD, clinical director of the Mind-Body Program, Emory University''s Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Emory School of Medicine, andalead author on the study.
Although secular in presentation, the compassion meditation program was based onathousand-year-old Tibetan Buddhist mind-training practice called "lojong" in Tibetan.
Lojong practices utilizeacognitive, analytic approach to challenge an individual''s unexamined thoughts and emotions toward other people, with the long-term goal of developing altruistic emotions and behavior towards all people. Each meditation class session combined teaching, discussion and meditation practice.
After the study interventions were finished, the students participated inalaboratory stress test designed to investigate how the body''s inflammatory and neuroendocrine systems respond to psychosocial stress.
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 12:28 PM
Poe Maw said...
သူငယ်ချင်းတို့ဒါ မျိုး blog လုပ်မယ် ဆို အပေါ်ပုံထဲက သူငယ်ချင်းတို့ကို အရူးလုပ်နေတဲ့သူတွေ (those who fool you) ကို အပေါ်ဆုံး ရောက်အောင် အရင်ပို့ လိုက်ပါဦး..